AUKEY BR-O8 Bluetooth Transmitter and Receiver with Bluetooth 5.0 and – Gadget Pro Myanmar
AUKEY BR-O8 Bluetooth Transmitter and Receiver with Bluetooth 5.0 and apt-X Low Latency
Product SKU: AUKEY BR-O8
- ဒီ ပစ္စည်းလေးကို တစ်ချို့ နည်းပညာကို စိတ်ဝင်စားလွန်းတဲ့သူတွေအတွက်တော့ မစိမ်းလှပါဘူး။ ဒါပေမယ့် တစ်ချို့ အတွက်က ဘာများလည်းလို့ မေးစရာ ရှိနိုင်ပါတယ်။
- အင်မတန် လည်း အသုံးတည့်ပြီး၊ ကျွန်တော်တို့ နိစ္စဓူဝမှာ ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိတဲ့ ကိစ္စလေးတွေကို ဖြေရှင်းပေးနိုင်တယ် ဆိုတာ မသိသေးတဲ့ သူတွေအတွက် ရှင်းပြပေးချင်ပါတယ်။
"ဟဲ့ နင်တို့ ရုပ်ရှင်ကြည့်နေတာ ကို အသံတိုးတိုး ကြည့်လို့မရဘူးလား။ နင့်အဖွားက နှလုံးရောဂါ ရှိတယ်လေ။"
"နင်တို့ ဂိမ်းကစားတာ အသံတိုးလို့ မရဘူးလား။ ဒီမှာ ဘုရားရှိခိုးမလို့။"
"လင်မယားနှစ်ယောက်၊ ကလေးအိပ်တုန်းလေး ရုပ်ရှင်ကို အားရပါးရ ကြည့်ချင်တယ်။ အသံကလည်း ကျယ် ချင်တိုင်း ကျယ်လို့ကမဖြစ်၊ Wireless နားကျပ် လေးတွေတော့ ရှိတယ်၊ TV နဲ့ ချိတ်ကြည့်မယ်၊ ၂ယောက်လုံးလည်း ကြည့်လို့ရ ရမယ်"။
"TV လေးက ကောင်းသေးတယ်၊ Speaker လေး အသစ်ဝယ်လာတာက Bluetooth speaker၊ TV နဲ့ Bluetooth Speaker လေးကိုချိတ်ချင်တယ်၊ TV မှာက Bluetooth မပါတော့ ချိတ်ရခက်ပြီ။"
"ကိုယ့် Speaker က အရင် YAMAHA, ONKYO တို့လို အကောင်းစားတွေ၊ အသံထွက်က ရှယ်၊ ခက်တာ Bluetooth မရဘူး၊ ခုအသစ်ထွက်တဲ့ Bluetooth ပါတဲ့ Model လဲမယ်ဆိုတော့လည်း စျေးမြောက်တော့ နှမြောတယ်။ ဖုန်းနဲ့ချိတ်မယ်ဆိုတော့လည်း ဖုန်းကို အဲ့ speaker တွေနား ယူယူသွားထားနေရတော့ သီချင်းနားထောင်ချိန်မှာ ဖုန်းသုံးရတာ အဆင်မပြေဘူး။ အဲ့တော့ speaker တွေကို Bluetooth ရအောင်လုပ်ပြီး၊ ဖုန်း Bluetooth နဲ့ ချိတ်ကြည့်မယ်။ အေးဆေး ဆိုဖာလေးမှာ ဖုန်းသုံးရင်း သီချင်းလေးနဲ့ ငြိမ့်မယ်ကွာ။"
အထက်က အချက်တွေက ကျွန်တော်တို့ နိစ္စဓူဝ အိမ်တွေမှာ ဖြစ်လေ့ ဖြစ်ထ ရှိကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဓလေ့အရဆိုရင် အိမ် တစ်အိမ်မှာ မိသားစု သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း စုစုစည်းစည်း နေလေ့ရှိတာကိုး။ တခြား ဆင်တူ ကိစ္စလေးတွေလည်း ရှိကြမှာပါ။
အထက်က ဖြစ်စဥ်မျိုးတွေကို အခု BR-O8 လေးက ဖြေရှင်းပေးနိုင်ပါတယ်။
BR-O8 မှာ Bluetooth Transmitter (အသံလွှတ်ပေး) ကော Receiver (အသံလက်ခံ) ပေးကော ပါဝင်တဲ့အတွက် လိုအပ်သလို mode ပြောင်းပြီး အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
Transmitter Mode (အသံလွှတ်ပေး)
Transmitter Mode က Bluetooth ကိုအသုံးပြုပြီး အသံကိုလွှတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth မပါတဲ့ TV ရဲ့ Aux ပေါက် (သို့) Optical ပေါက်ကို BR-O8 နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးရမှာပါ။ သင့် Bluetooth Earphone (သို့ )Bluetooth Speaker ကနေတဆင့် BR-O8ကို ချိတ်ဆက်ပြီး TV ကလာတဲ့ အသံတွေကို စိတ်တိုင်းကျ နားဆင်ခံစားနိုင်ပါပြီ။
Receiver Mode (အသံလက်ခံ)
Receiver Mode က Bluetooth ကို အသုံးပြုပြီး အသံကို လက်ခံပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ Bluetooth မပါတဲ့ Speaker ကို BR-O8 နဲ့ ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။ သင့် ဖုန်းကို BR-O8 နဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး၊ ဖုန်းက သီချင်းတွေကို BR-O8 Bluetooth ကနေတဆင့် Speaker နဲ့ စိတ်ကြိုက် နားဆင်နိုင်ပါပြီ။
တခြား BR-O8 ရဲ့ Features တွေက
Bluetooth 5.0 ကို အသုံးပြုပေးထားတဲ့အတွက် ချိတ်ဆက်မှု မြန်ဆန်ပါတယ်။
apt-X Low Latency ကို သုံးပေးထားတဲ့အတွက် အသံနောက်ကျတာတွေ အနည်းဆုံးဖြစ်စေပါတယ်။
Bluetooth Device ၂လုံးအထိ တစ်ပြိုင်နက် ချိတ်ဆက်နိုင်ပါတယ်။
Technology: BT 5, aptX, aptX-LL
Operating Range: Up to 50m / 164ft
Dimensions: 113 x 110 x 73mm / 4.45” x 4.33” x 2.87”
2-in-1 Wireless Transmitter and Receiver
တင်သွင်းဖြန့်ချိတဲ့ Asia Star Technology (AST) Co., Ltd ရဲ့ အာမခံ (၁၈)လ ပါဝင်ပါတယ်။
Experience Bluetooth5audio with faster pairing, improved connection range (up to 50m/164’) . aptX Low Latency codec ensures high-quality wireless sound and synchronized audio and video for gaming and watching movies
Wirelessly stream audio from your non-Bluetooth TV or home stereo system to your Bluetooth speakers or headphones. Alternatively, stream audio from your Bluetooth-enabled phone or tablet to your wired speakers or headphones
Simultaneously connect to two pairs of wireless headphones in transmitter mode to share your movies or music withafriend or family member, or to two wired speakers in receiver mode to receive audio from either one of two connected phones
Featuresaconvenient touch control display to keep you informed on the connection status and audio codec used. And with two slide switches to make it easy to choose audio mode as needed
Official 18 Months Warranty by Distributor Asia Star Technology (AST) Co., Ltd
AUKEY LC-Q6 10W Graphite Wireless Charger Pad